Bogga ugu weyn / blog / Musqusha ku rakib shelf, musqusha isla markiiba ku noolow 5 mitir oo laba jibbaaran!
2021 / 04 / 11 Qoondayntablog 5003 0
Qoysas badan ayaa leh aag yar oo musqusha ah, oo ay u badan tahay, weelka lagu dhaqo iyo badeecadu waa dhammaan musqusha. Sida inji ah meel bannaan, si loo hubiyo in labadaba aagga waxqabadka, laakiin sidoo kale la doonayo in la ballaariyo musqusha, kaydinta wanaagsan, habka ugu wanaagsan ayaa ah in si wanaagsan looga faa'iideysto 1 ㎡ ee ka sarreeya musqusha.
1㎡> 3㎡, kana sarreeya talooyinka kaydinta musqusha.
Golaha wasiirada: Ha qaadanin boos, laakiin sidoo kale inaad buuxiso baahiyaha kaydinta.
Qaybaha sare u qaadista isticmaalka booska wejiga.
Sallaan labadaba alaabooyinka keydinta iyo qaybaha qurxinta.
Muraayadaha: muuqaal ahaan ballaadhi booska.
Haddii aadan haysan meel kugu filan oo aad ku keydiso musqusha, waxaad ka amaahan kartaa derbiga qaawan ee musqusha gadaashiisa ah.
Waxa ugu horeeya ee aad sameyn kartid waa inaad rakibtid armaajo gidaarka gadaashiisa musqusha si aad u xajisato, oo aad dhigatid musqulaha maalinlaha ah ee loo baahan yahay, taas oo kaliya hagaajinaysa ka faa'iideysiga booska, laakiin sidoo kale waxay fududeyneysaa helitaankeeda maalin kasta, oo qumman!
Waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hubiso inaad fikrad fiican ka haysato waxa aad sameyneyso. Ku darista cusub ee aruurinta ayaa ah midda ugu cusub ee ururinta.
Waxa ugu horreeya ee aad sameyn kartid waa inaad tijaabisid kabadhan fudud ama shelf, oo aad ka iibsato sheyga dhammaaday khadka tooska ah.
Waxaa laga yaabaa in kabadh aad u ballaaran oo kaydinta ahi aanu ku habboonayn gurigaaga, laakiin inaad qaybiso qaybiyaha yar ayaa aad ugu habboon. Waxay u adkeysan kartaa culeys kasta oo walxaha ah, kuwa waaweyn sida qurxinta cagaarka ah, kuwa yar yar sida dhalooyinka daawada, suufka suufka iyo wixii la mid ah.
Sidoo kale waa hab fiican oo looga faa'iideysan karo gurigaaga. Hadafka ugu weyn ee shirkaddu waa inay siiso macaamiisheeda adeegga ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Saddexda qaybood ee ka sarreeya musqusha waxay keydinayaan meel waxayna isla mar ahaantaa wax ku keydsadaan, taas oo ah 100 dhibcood oo wax ku ool ah.
Haddii aad u maleyneyso in waxa kor ku xusan ay ka dhib badan yihiin, markaa waxaad dooran kartaa inaad dhigto jaranjaro yar oo ka sarreysa musqusha, oo la dhigo derbiga, ma qabsan doono boos aad u badan, tuwaallada wax lagu keydiyo, iwm ayaa aad u habboon.
Also Waxaad sidoo kale ku dul sudhan kartaa dambiil wax lagu keydiyo, musqusha dhaadheer ee gudaha kaydinta oo meelna u dhig.
Muraayadda ayaa la dul dhigay suuliga korkiisa marka lagu daro howl maalmeedka isticmaalka, iyo shaqada ballaarinta. Muraayadaha ayaa ka tarjumi kara, diidi kara, kordhin karana dhalaalka qolka, iyagoo labalaabaya saameynta muuqaalka ee booska.
Intaas waxaa sii dheer waxaad sidoo kale isku dari kartaa muraayadda musqusha iyo keydka la dhisay si loo hubiyo quruxda derbiga adoo sidoo kale waxyaabaha korka ka saaraya derbiga.
Eeg kiisaskan kor ku xusan, ma awoodno inaan celinno xiisaha, waxaan dooneynaa inaan dib ugu laabanno nadiifinta musqusha u gaarka ah, ku deg degno inaan wax ka qabanno si aan u buuxiyo musqusha 1 mitir laba jibbaaran ee bannaan.
Hore:: Sidee Loogu Rakibaa Aagga Musqusha Meel Ficil Ah? Ka Bilow Afartan Dhinac, Si Aad U Xaqiijiso Fiirintaas Fiican Iyo Adeegsiga Wanaagsan! Next: Mowjadda Qabow Ayaa Mar Kale Dillaacday! Alaabada Musqusha, Sidee looga Hortagaa Qabowga?
2021 / 04 / 12 6688